Faah faahin:- Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo qarax lagula eegtay gobolka Sh/dhexe – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo qarax lagula eegtay gobolka Sh/dhexe
Qarax noociisu yahay miinada dhulka lagu aaso ayaa maanta markale lala eegtay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee maraayay agagaarka tuulada Qalimow oo qiyaastii 30km u jirta degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa ka gaabsaday inuu faah faahin dheeraad ah naga soo siiyo qaraxaasi maanta ciidankooda lagula eegtay deegaan ku dhaw degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Ciidanka qaraxa lala eegtay oo ay la socdeen saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa la sheegayaa inay xilligaasi kusii wajahnaayeen dhinaca magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo goobta uu qaraxa ka dhacay markii dambe gaaray ayaa howlgalo baaritaano ah halkaasi ka sameeyay.
Ma jirto cid illaa iyo haatan sheegatay ama loo soo qab-qabtay qaraxaas oo inta badan lala eegto ciidamada dowladda federaaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Sh/dhexe.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay aheyd markii qarax ceynkaan oo kale ah duuleedka degmada Balcad lagu weeraray gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday 1 askari, halka 6 kale ay ku dhaawacantay.